SEA GAMES Esports Dota2 (Laos Vs Myanmar) Game-1 Review – Gaming Noodle
SEA GAMES Esports Dota2 (Laos Vs Myanmar) Game-1 Review
Team Myanmar – Radiant (First Pick)
Team Laos – Dire
.: Ban Phase :.
Team MM – Puck, Kunkka, Alche, Timber, Winter Wyvern, Magnus
Team Laos – Treant, Venom, Lina, Razor, Crystal Maiden, Sand King
.: Pick :.
Team MM – Io, Tiny, Oblivion, Meepo, Ursa
Team Laos – Leshrac, Venge, Skywrath Mage, Huskar
WESG မှာအုပျစုပှဲစဉျရော၊ တတိယနရောလုပှဲရော ဆော့ထားတဲ့ အသငျးပီသစှာ Team Laos ဟာ Insane ရဲ့ Lina ကို Ban လာခဲ့ပါတယျ။ Team MM က First pick phase မှာ io + tiny ကို အားကွီးနဲ့ခလြာခဲ့ပွီး Laos က Lesh, VS တို့ကို ခထြားရာကနေ Third Pick မှာပါ Sky ထပျခတြဲ့အတှကျ မွနျမာဘကျက Oblivion ကိုခကျြခငျြးပွနျခလြိုကျပါတယျ။
Team Laos ကတော့ gameplan ကို ကွိုစဉျးစားထားတယျလို့ ယူဆရပွီး LC ကို မဆိုငျးမတှ ဆကျခခြဲ့ပမေယျ့ ဒီဘကျမှာက io, tiny, oblivion တို့အားလုံးက LC duel ကို ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့သူတှခေညျြးပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ Team MM ကတော့ Insane ရဲ့ Most Fav Hero ဖွဈတဲ့ Meepo ကိုပါ နောကျဆုံး Ban Phase မှာ ဘနျးသှားမှာစိုးလို့ထငျတယျ၊ စတုတ်ထ Pick အနနေဲ့ ခလြိုကျပါတယျ။
.: Laning Phase :.
Top – Tiny(Rap Rap), Oblivion(ShowT) vs Venge, Lesh
Mid – Meepo(Insane) vs Huskar
Bot – Ursa(Leo), io(Kenji) vs Sky, LC
အစမှာ Lesh, VS တို့က အောကျကို သှားပွီး LC ကို အပျေါမှာတဈယောကျတညျး ထားဖို့ ကွိုးစားသေးပမေယျ့ Team Myanmar က အစောပိုငျးမှာ Top ကို Tri လာမယျ့ပုံပွခဲ့တာကွောငျ့ ခကျြခငျြး Lane change လိုကျရပါတယျ။ အစောပိုငျးမှာ VS, Lesh အတှဲနဲ့ LC, Sky တို့ကတော့ သူတို့လမျးတှမှော Damage ပိုထှကျခဲ့ပါတယျ။ Team MM ယူထားတဲ့ Draft ပုံစံကလညျး Spell စုံမှ ဝုနျးလို့ရမယျ့ ပုံစံဖွဈနတောပါပါတယျ။
First Blood – Team Laos
အလယျမှာ Insane Meepo ကို Huskar က ဖိနပေမေယျ့ Insane ကလညျး သူ့တာဝါနားရောကျလာတဲ့အခါ တဈခကျြ try ကွညျ့လိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Huskar ရဲ့ DPS ကွောငျ့ First Blood ပေးလိုကျရသလို မရှေးမနှောငျးမှာပဲ Lesh ကလညျး Second Blood ယူလိုကျပါတယျ။ သို့သျောလညျး TP ပွနျကလြာတဲ့ Meepo ဟာ Huskar ကို ခကျြခငျြး ပွနျသတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
5mins Bounty ကို ၂ ခုစီ ခှဲယူခဲ့သလို Hero kill ကလညျး4–5နဲ့ သူမသာကိုယျမသာပါပဲ။ Ursa နညျးနညျး ပွနျထောငျလာသလို Insane Meepo လညျး ကွုံသလို တောထဲဝငျလာခဲ့ပါပွီ။ 6min မှာ အပျေါလမျး clash အသေးလေး ဖွဈသှားခဲ့ပွီး Insane Meepo Double-kill ရပမေယျ့ Lesh ကို ပွနျပေးလိုကျရပါတယျ။
8min – First 10 Kills
Hero Kill က အရမျးမကှာဘဲ အလယျလမျးက Huskar ကို Tiny က ဝငျနှိုကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ပွနျကသြှားခဲ့တာကွောငျ့ 8 – 10 နဲ့ ပွနျပေးလိုကျရသလို Mid Tower 1 ကို ယူတဲ့အခြိနျမှာ Meepo, Tiny က ထပျဝငျပမေယျ့ နှဈယောကျလုံး ထပျသသှေားခဲ့ရပါတယျ။ Last pick Huskar က အားလုံးထဲမှာ အသိသာဆုံး ဒုက်ခပေးနိုငျခဲ့ပွီး ဒုတိယက Leshrac လို့ ဆိုရမှာပါ။
10min – Outpost
10min မှာတော့ ပထမဆုံး Outpost capture မှာ Top Outpost ကိုလာသိမျးတဲ့ Lesh ကိုပါ လိုကျပှဲရလိုကျပွီး တဈယောကျတဈခုဆီ ခှဲယူခဲ့ပါတယျ။ Laning phase မှာ အနညျးငယျနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ Spell နညျးနညျးစုံလာတဲ့ Team MM ဘကျက နညျးနညျးရနျလိုကျရှာလာခဲ့ပါတယျ။
13min – Battle
Roshan pit နားမှာ River ထဲက Huskar ကို ဖမျးဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ 5v5 Battle အဖွဈ ကူးပွောငျးသှားခဲ့ပွီး ဟိုဘကျက Support နှဈယောကျကို ဒီဘကျက သုံးယောကျနဲ့ Trade လိုကျရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ Huskar က Roshan သတျပွီး Aegis ယူသှားလိုကျပါတယျ။
15min – Outpost
15min မှာတော့ Bot outpost ကို ပွနျယူဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ Meepo ကို အလှယျတကူပဲ တဈဖကျက ကောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ Team MM ဘကျက နညျးနညျးလေး လောနတောတှေ တှခေဲ့ရပွီး Aegis ကိုငျထားတဲ့ Team Laos ကတော့ Bot ဘကျခွမျးကို အားစိုကျ Push လာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို ShowT Obv နဲ့ Insane Meepo တို့က အခှငျ့အရေးယူပွီး Top နဲ့ Mid Tower တှကေို သှားယူခဲ့ပါတယျ။
17min Bot push – Team Laos
Bot lane ကို မပွနျဘဲ ဆကျတှနျးတဲ့ Team Laos ကို ကာကှယျခဲ့ပမေယျ့ Tower3 ပေးလိုကျရသလို Insane bb နဲ့ ပွနျထှကျလာခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီမှာ Huskar ရလိုကျပမေယျ့ die back ပွနျဖွဈသှားခဲ့တယျ။ Huskar ကို ရှတေ့ငျလာပွီး4protect 1 ဆနျဆနျ ကစားလာတဲ့ လာအိုကို ပွနျလှနျဖို့ မလှယျဘူး ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
20min – Battle again
Bot မှာ Huskar ကို Ursa BKB နဲ့ Meepo ဝငျဖမျးပမေယျ့ VS nether swap နဲ့ ကယျခဲ့သလို LC ကပါ Ursa ကို Sacrifice Duel ဆှဲပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒီမှာ Team MM ဘကျက Rap Rap Tiny ကလှဲလို့ လေးယောကျကသြှားခဲ့ပွီး တဈဖကျကတော့ LC နဲ့ Huskar တောငျ မသသှေားခဲ့တာ တျောတျောလေး ဆိုးရှားသှားခဲ့တာပါ။
21min – Mid Push
Radiant Top Jungle မှာ Meepo ကို LC Duel နဲ့ ရလိုကျတဲ့ Team Laos ဟာ ခကျြခငျြး Mid ကို တကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ WESG မှာ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ Team MM ရဲ့ Highground Defense ကို ပွသနိုငျခဲ့ပွီး VS တဈယောကျ ကကြာ ခကျြခငျြးပွနျဆုတျသှားခဲ့ရပါတယျ။ ဒါဟာ Team MM အတှကျတော့ ပထမဆုံး Comeback မြှျောလငျ့ခကျြပါပဲ။
23min – Second Roshan
Bot Outpost ကို Team MM က Smoke နဲ့သှားခဲ့ခြိနျမှာ ဒုတိယ Roshan ကို လာအိုက ယူသှားခဲ့ပွနျပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ Bot ကိုခကျြခငျြးပွေးလာဆိုငျတဲ့အခါ Team MM က ထငျသလောကျ အခွအေနမေဆိုးဘဲ ပွနျဆိုငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကံဆိုးသှားတာက Lesh မှာ Cheese ပါလာတာကွောငျ့ သသေငျ့တဲ့အခြိနျမှာ မသသှေားဘဲ လှတျသှားတာပါ။
ဒီဘကျက Insane Meepo ပေးလိုကျရပွီး Team Laos ကတော့ Aegis + Cheese နဲ့ ဝငျဆိုငျပမေယျ့ Support ၂ ကောငျလုံး သပွေီး Battle ကို ဆိုငျးလိုကျရပါတယျ။
26min – Bot Push
Cheese မရှိတော့ပမေယျ့ Aegis ရှိသေးတဲ့ Team Laos ဟာ အောကျလမျးကနေ တဈခါပွနျတကျလာတဲ့အခါ တားလို့မရတော့ဘဲ တဈယောကျခငျြးစီ ပွနျကသြှားခဲ့တဲ့နောကျ Throne တနျးရိုကျနတေဲ့ Laos ကို မွနျမာဘကျက GG ချေါလိုကျရပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ Huskar Last pick က တျောတျောလေး သကျရောကျမှုရှိပွီး သူ့ကွောငျ့သာ အစောပိုငျးမှာ လာအိုဘကျက အသာစီးယူနိုငျခဲ့တာဖွဈသလို Roshan ကိုလညျး စောစောစီးစီး ရသှားခဲ့တာပါ။
Huskar နဲ့ Lesh တို့ကို Target ထားခဲ့ပမေယျ့ အမွဲတမျး LC နဲ့ VS တို့ရဲ့ Ulti တှကွေောငျ့ လှတျသှားခဲ့ပွီး Battle ပါ လိုကျနိမျ့သှားခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ io relocate နဲ့ pick လုပျဖို့ ကွိုးစားတာလညျး တဈခါနှဈခါလောကျပဲ အောငျမွငျခဲ့ပွီး တဈဖကျက ကဈြလဈတဲ့ ပုံစံကို mid-game မှာ မထိုးဖောကျနိုငျဘူး ဖွဈသှားပါတယျ။
အခုဆိုရငျတော့ လာအိုက တဈပှဲအသာနဲ့ ဦးဆောငျနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ ဒုတိယပှဲကို ကွညျ့ရတော့မှာပါ။
WESG မှာအုပ်စုပွဲစဉ်ရော၊ တတိယနေရာလုပွဲရော ဆော့ထားတဲ့ အသင်းပီသစွာ Team Laos ဟာ Insane ရဲ့ Lina ကို Ban လာခဲ့ပါတယ်။ Team MM က First pick phase မှာ io + tiny ကို အားကြီးနဲ့ချလာခဲ့ပြီး Laos က Lesh, VS တို့ကို ချထားရာကနေ Third Pick မှာပါ Sky ထပ်ချတဲ့အတွက် မြန်မာဘက်က Oblivion ကိုချက်ချင်းပြန်ချလိုက်ပါတယ်။
Team Laos ကတော့ gameplan ကို ကြိုစဉ်းစားထားတယ်လို့ ယူဆရပြီး LC ကို မဆိုင်းမတွ ဆက်ချခဲ့ပေမယ့် ဒီဘက်မှာက io, tiny, oblivion တို့အားလုံးက LC duel ကို ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Team MM ကတော့ Insane ရဲ့ Most Fav Hero ဖြစ်တဲ့ Meepo ကိုပါ နောက်ဆုံး Ban Phase မှာ ဘန်းသွားမှာစိုးလို့ထင်တယ်၊ စတုတ္ထ Pick အနေနဲ့ ချလိုက်ပါတယ်။
အစမှာ Lesh, VS တို့က အောက်ကို သွားပြီး LC ကို အပေါ်မှာတစ်ယောက်တည်း ထားဖို့ ကြိုးစားသေးပေမယ့် Team Myanmar က အစောပိုင်းမှာ Top ကို Tri လာမယ့်ပုံပြခဲ့တာကြောင့် ချက်ချင်း Lane change လိုက်ရပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာ VS, Lesh အတွဲနဲ့ LC, Sky တို့ကတော့ သူတို့လမ်းတွေမှာ Damage ပိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Team MM ယူထားတဲ့ Draft ပုံစံကလည်း Spell စုံမှ ဝုန်းလို့ရမယ့် ပုံစံဖြစ်နေတာပါပါတယ်။
အလယ်မှာ Insane Meepo ကို Huskar က ဖိနေပေမယ့် Insane ကလည်း သူ့တာဝါနားရောက်လာတဲ့အခါ တစ်ချက် try ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Huskar ရဲ့ DPS ကြောင့် First Blood ပေးလိုက်ရသလို မရှေးမနှောင်းမှာပဲ Lesh ကလည်း Second Blood ယူလိုက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း TP ပြန်ကျလာတဲ့ Meepo ဟာ Huskar ကို ချက်ချင်း ပြန်သတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
5mins Bounty ကို ၂ ခုစီ ခွဲယူခဲ့သလို Hero kill ကလည်း4–5နဲ့ သူမသာကိုယ်မသာပါပဲ။ Ursa နည်းနည်း ပြန်ထောင်လာသလို Insane Meepo လည်း ကြုံသလို တောထဲဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ 6min မှာ အပေါ်လမ်း clash အသေးလေး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး Insane Meepo Double-kill ရပေမယ့် Lesh ကို ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
Hero Kill က အရမ်းမကွာဘဲ အလယ်လမ်းက Huskar ကို Tiny က ဝင်နှိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ပြန်ကျသွားခဲ့တာကြောင့် 8 – 10 နဲ့ ပြန်ပေးလိုက်ရသလို Mid Tower 1 ကို ယူတဲ့အချိန်မှာ Meepo, Tiny က ထပ်ဝင်ပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး ထပ်သေသွားခဲ့ရပါတယ်။ Last pick Huskar က အားလုံးထဲမှာ အသိသာဆုံး ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယက Leshrac လို့ ဆိုရမှာပါ။
10min မှာတော့ ပထမဆုံး Outpost capture မှာ Top Outpost ကိုလာသိမ်းတဲ့ Lesh ကိုပါ လိုက်ပွဲရလိုက်ပြီး တစ်ယောက်တစ်ခုဆီ ခွဲယူခဲ့ပါတယ်။ Laning phase မှာ အနည်းငယ်နိမ့်ခဲ့တာကြောင့် Spell နည်းနည်းစုံလာတဲ့ Team MM ဘက်က နည်းနည်းရန်လိုက်ရှာလာခဲ့ပါတယ်။
Roshan pit နားမှာ River ထဲက Huskar ကို ဖမ်းဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် 5v5 Battle အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပြီး ဟိုဘက်က Support နှစ်ယောက်ကို ဒီဘက်က သုံးယောက်နဲ့ Trade လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Huskar က Roshan သတ်ပြီး Aegis ယူသွားလိုက်ပါတယ်။
15min မှာတော့ Bot outpost ကို ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Meepo ကို အလွယ်တကူပဲ တစ်ဖက်က ကောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Team MM ဘက်က နည်းနည်းလေး လောနေတာတွေ တွေ့ခဲ့ရပြီး Aegis ကိုင်ထားတဲ့ Team Laos ကတော့ Bot ဘက်ခြမ်းကို အားစိုက် Push လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ShowT Obv နဲ့ Insane Meepo တို့က အခွင့်အရေးယူပြီး Top နဲ့ Mid Tower တွေကို သွားယူခဲ့ပါတယ်။
Bot lane ကို မပြန်ဘဲ ဆက်တွန်းတဲ့ Team Laos ကို ကာကွယ်ခဲ့ပေမယ့် Tower3 ပေးလိုက်ရသလို Insane bb နဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ Huskar ရလိုက်ပေမယ့် die back ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ Huskar ကို ရှေ့တင်လာပြီး4protect 1 ဆန်ဆန် ကစားလာတဲ့ လာအိုကို ပြန်လှန်ဖို့ မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
Bot မှာ Huskar ကို Ursa BKB နဲ့ Meepo ဝင်ဖမ်းပေမယ့် VS nether swap နဲ့ ကယ်ခဲ့သလို LC ကပါ Ursa ကို Sacrifice Duel ဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Team MM ဘက်က Rap Rap Tiny ကလွဲလို့ လေးယောက်ကျသွားခဲ့ပြီး တစ်ဖက်ကတော့ LC နဲ့ Huskar တောင် မသေသွားခဲ့တာ တော်တော်လေး ဆိုးရွားသွားခဲ့တာပါ။
Radiant Top Jungle မှာ Meepo ကို LC Duel နဲ့ ရလိုက်တဲ့ Team Laos ဟာ ချက်ချင်း Mid ကို တက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် WESG မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Team MM ရဲ့ Highground Defense ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး VS တစ်ယောက် ကျကာ ချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ Team MM အတွက်တော့ ပထမဆုံး Comeback မျှော်လင့်ချက်ပါပဲ။
Bot Outpost ကို Team MM က Smoke နဲ့သွားခဲ့ချိန်မှာ ဒုတိယ Roshan ကို လာအိုက ယူသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Bot ကိုချက်ချင်းပြေးလာဆိုင်တဲ့အခါ Team MM က ထင်သလောက် အခြေအနေမဆိုးဘဲ ပြန်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကံဆိုးသွားတာက Lesh မှာ Cheese ပါလာတာကြောင့် သေသင့်တဲ့အချိန်မှာ မသေသွားဘဲ လွတ်သွားတာပါ။
ဒီဘက်က Insane Meepo ပေးလိုက်ရပြီး Team Laos ကတော့ Aegis + Cheese နဲ့ ဝင်ဆိုင်ပေမယ့် Support ၂ ကောင်လုံး သေပြီး Battle ကို ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။
Cheese မရှိတော့ပေမယ့် Aegis ရှိသေးတဲ့ Team Laos ဟာ အောက်လမ်းကနေ တစ်ခါပြန်တက်လာတဲ့အခါ တားလို့မရတော့ဘဲ တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြန်ကျသွားခဲ့တဲ့နောက် Throne တန်းရိုက်နေတဲ့ Laos ကို မြန်မာဘက်က GG ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ Huskar Last pick က တော်တော်လေး သက်ရောက်မှုရှိပြီး သူ့ကြောင့်သာ အစောပိုင်းမှာ လာအိုဘက်က အသာစီးယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလို Roshan ကိုလည်း စောစောစီးစီး ရသွားခဲ့တာပါ။
Huskar နဲ့ Lesh တို့ကို Target ထားခဲ့ပေမယ့် အမြဲတမ်း LC နဲ့ VS တို့ရဲ့ Ulti တွေကြောင့် လွတ်သွားခဲ့ပြီး Battle ပါ လိုက်နိမ့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ io relocate နဲ့ pick လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာလည်း တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်က ကျစ်လစ်တဲ့ ပုံစံကို mid-game မှာ မထိုးဖောက်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ လာအိုက တစ်ပွဲအသာနဲ့ ဦးဆောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ဒုတိယပွဲကို ကြည့်ရတော့မှာပါ။